Bayern Munich Oo Dhageysaneysa Dalabyada Bartilmaameedka Kooxda Chelsea, Niklas Sule – Garsoore Sports
Bayern Munich Oo Dhageysaneysa Dalabyada Bartilmaameedka Kooxda Chelsea, Niklas Sule
Kooxda kubbada-cagta ee Chelsea ayuu bartilmaameed u yahay daafac kooxda Bayern Munich Niklas Sule iyadoo kooxda Jarmalka ay diyaar u tahay haatan iney dhageysato dalabyada u imanaya xiddigan.
Sida lagu daabacay Bild, Niklas Sule waa mid ka mid ah ciyaartoyda kooxda heysata horyaalka Bundesliga ay dooneyso inay iibiso xagaagan. Chelsea ayaa xiiseyneysa ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Jarmalka, tababare Thomas Tuchel ayaana lagu soo waramayaa inuu yahay awooda riixaya xiisahan.
The Blues ayaa dooneysa inay xoojiso safkeeda dambe. Thiago Silva ayaa qarka u saaran inuu 37 sano jirsado, halka Andreas Christensen, Antonio Rudiger, iyo Cesar Azpilicueta qandaraasyadooda ay dhowaan dhici doonaan, iyadoo midkood laga yaabo inuu ka tago kooxda, sida laga soo xigtay The Athletic.
Siddaa darteena, Thomas Tuchel ayaa ka codsaday maamulka kooxda Chelsea inay la soo saxiixdaan daafac xagaagan laakiin sidoo kale wuxuu diyaar u yahay inuu fursad siiyo da’yarta kooxda sida Marc Guehi, Ethan Ampadu, iyo Malang Sarr oo ku jira diiwaanka kooxda, waxaana lagu wadaa inay kasoo laabtaan amaahdooda xagaagan.